Taariikhda Dawlada Sucuudiga Iyo Qaabkii Loo Aas-Aasay Wax Ka Baro, Qormadii 15` aad
Friday June, 22 2018 - 04:20:31
Saturday August 26, 2017 - 09:39:17 in by Burco Office
Waxa inoo soo dhammaaday qaybtii koobaad ee dawlad-nimada Sucuudiga. Waxa aynu halkan ka guda gali doonaa qayntii labaad ee taariikhda dawlada Sucuudiga iyo mawduucii taxanaha ahaa ee inoo joogay Ibraahim Baasha oo ka tegey deegaanka Najda iyo xasilooni daradii ka jirtay 6 sannadood ee u danbeeyey iyo sheegashadii Maxamed Bin Mushaar Ibnu Mucmar Amiirnimada Darciya.
MUSHAAR BIN SUCUUD (AL-KABIIR)
1235 -1235hijriyada oo ku beegan 1819-1819miilaadiga
Mushaar waxa ay walaala ahaayeen Imaam Cabdullaahi bin Sucuud , waxaanu Mushaar ka mid ahaa qoyska reer Aalla Sucuud weliba waxa kale oo uu ka mid ahaa dadkii Ibraahim Masar u mastaafuriyey si aannay u soo laabanin Boqortooyadii reer Aalla
Sucuud . Laakiin Mushaar waxa u suurtagashay in uu halkaas ka baxsado , waxaanu firdhadkii orod ku soo galay deegaanka Najda halkaas oo uu koox taageerayaashiis ah ku rursaday isagoo gargaar weydiisanaaya dadka deegaanka Washma kuna jihaysan Darciya. Markii uu maqlay Maxamed Bin Mushaar Bin Mucmar Amiirkii Najda ee xilligaas soo ifbixida Mushaar Bin Sucuud waa uu soo dhaweeyey oo siyaasad debecsan ayuu kula dhaqmay waxaanu uga tanaasulay maamulkiisii oo uu ku wareejiyey heshiisna way wada galeen. Markii lagu wareejay xukunkii Najda Mushaar bin Sucuud waxa uu heshiis lagalay dadkii deegaanka Najda, sidoo kale waxa uu Riyaad Amiirnimo ugu magacaabay Turki Bin Cabdullahi .
Ibnu Mucmar waxa uu ka murugooday kana xumaaday ka tanaasulidii iyo ka tagidii uu sida fudud uga tagay maamulkiisii, waxaanu soo ururiyey ciidamadiisii taabacsanaa waxaanu u dhaqaajiyey dhammaan dhinacyada Najda iyo dhinaca Darciyaba Mushaar bin Sucuud uma suurta galin inuu difaaco jiritaanka maamulkiisa sababtuna waxa ay ahayd waxa ka badnaa ciidamada Mucmar oo hareereeyey ugu danbayna waa is dhiibay oo jeelka ayaa la dhigay.
Waxa kale oo uu Mucmar ciidamadiisii u dhaqaajay dhinaca Riyaad halkaas oo uu hore uga sii cararay Amiir Turki Bin Cabdullaahi , waxaana sidaa xukunkii mar labaad kula wareegay Ibnu Mucmar oo taageero ka helaayey dawladii Cusmaaniyiinta . Waxa kale uu Mucmar Riyaad u magacaabay wiilkiisii Mushaar .
AMIIR TURKI BIN CABDULLAAHI IYO ISKU DAYGIISII KOOBAAD
1235 illaa 1236H oo ku beegnayd 1819 illaa1820miilaadiga
Waxa loo aqoon saday innuu ka mid ahaa qoyska reer Aalla Sucuud xukaamtii soo martay kuwii ugu go`aan qaadashada adkaa.
Amiir Turki markii laga qabsaday Riyaad waxa uu tegey deegaanka Xaa`ir halkaas oo uu ku dhuumanaayey kalana socday si joogta ah wararka dalka iyo xaaladaha kolba soo kordhaayey. Amariir Turki warka ugu weynaa ee dhagihiisa ku soo dhacaayey waxa uu ahaa burburka iyo barakicinta ay ku hayee deegaanka Najda Ibnu Mucmar iyo ciidamadii Masaarida ahaa ee uu garab sanaayey. Amiir Turki waxa uu ka soo baxay Xaa`ir isagoo colwata kuna wajahan Darciya , markii uu Darciya soo galay waxa uu qabtay oo uu gacanta ku dhigay Ibnu Mucmar iyo wiil uu dhalay waxanu ka codsaday in la siidaayo Mushaar Bin Sucuud.
Waxa uu bilaabay Amiir Turki in uu qaybo ka mid ah deegaanka Najda soo ceshado kana saaro ciidamadii dalka haystay laakiin uma suurtagali oo Maxamed Caligii Masar iyo madaxdiisii ciidamadu waxa ay bilaabeen in ay soo diraan soona abaabulaan kooxo hubaysan, kuwaas oo xasilooni daro ka abuuray Riyaad iyo nawaaxigeeda kuna qasabtay inuu ka huleelo Amiir Turki Riyaad oo uga baxo dhinaca deegaanka (Xulwa) sidaasna wadanki waxa uu afka lagalay fowdo iyo daganaasho la`aan baahsan.
Maantana halkaa ha inoo joogo Maqaalku .
Lasoco qaybta 16aad maalinta jimcaha ah ee fooda inagu soo haysa Insha Allah tacaalaa.
Qalinkii:Maxamed Muuse Cilmi
Aabaha Dhalay Wiilyar oo ku dhintay Duufaan ka dhacday Sallaxlay oo ka warramay Qaabkii uu ku dhintay Wiilkiisu
17/06/2018 - 09:04:51
War Deg Deg Ah:-Dawlada Soomaaliya Oo Amar Culus Dul Dhigtay Alaabta Caruurtu Ku Ciyaarto Ee Ka Samaysan Qoryaha, Baskooladaha Iyo Waxyaabaha Qarxa.
Odayaasha Beesha Hawiye Oo Taageeray U Muujiyey Dawlada Somaliland,Una Quus Gooyey Maamulka Puntland
Gudaha:-Dawlada Kenya Oo Ruqsadii Kala Noqotay 41 Diyaaradood Iyo Tirada Soomaaliya Ka Hawl Gala.
08/06/2018 - 16:42:21
Hargeisa:-Gudoomiyaha Xisbiga Mucaraadka Somaliland Ee Ucid Oo Soo Bandhigay Hub Dawlada Soomaliya Siisay Maamulka Puntland.
07/06/2018 - 13:49:00
Yeman:-Tahriibayaal ku dhamaaday xeebaha dalka Yemen Iyo Moogananta Dawladaha Somalida.
Kenya:-Dawlada Kenya Oo Si Cadho Leh Ugu Jawaabtay Garoonkeeda Lala Bar bar Dhigay Ka Somalia.